दोलखाको एनसेल टावर ध्वस्त, कसले लगायो आगो ? — Hamro Sanchar
दोलखाको एनसेल टावर ध्वस्त, कसले लगायो आगो ?
सोमबार राति १० बजेतिर एक्कासि आगलागी भएको खबर प्राप्त भएपछि ११ बजे प्रहरीको सक्रियतामा आगो निभाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । कसैले आगो लगायो वा विद्युत सर्ट भएर लाग्यो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
देशका विभिन्न ठाउँमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आगो लगाएको समाचार आइरहेको छ । तर चरिकोटको टावरमा उसैले लगायो वा के भयो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म केही सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।